Yarra Council - Parks and Halls for Hire Somali Skip to main content
You are here: Home > Services > Parks and Halls for Hire Somali Print Page
Parks and Halls for Hire Somali Baagag iyo Hoolal ijaara ah
Degmada Yarra waxay leedahay baagag kala duwan, hoolal, iyo xaruma bulsho iyo tas-hiilaad kale oo kooxaha bulshooyinku ay ijaaran karaan. Mid walbaa wuxuu leeyahay qaab ka duwan kan kaleeto wuxuuna qaadi karaa dad gaaraya 20 ilaa 800 oo qof.
Tas-hiilaadka la helli karaa waa mid noocee ah?
* Hoolal waa waaweyn – oo ku haboon arooska, kulamada dadweynaha, ruwaayadaha, majaajilada iyo dabaaldegyada
* Qolalka shirka iyo xarumaha bulshada – oo ku haboon aqoon-is weydaarsiga, munaasibadaha bulshada iyo barnaamijyada bulshada
* Baagag iyo jardiinooyin – ku haboon munaasabadaha, aroosyada iyo kulamada bulshada
Sidee goob u ballansadaa?
Si aad u ballansato goob, fadlan la xiriir Golaha 9205 5555. Fadlan isku day inaad horay u sii qabsato si aad u xaqiijiso in goobta aad doonayso la helli karo.
Immisa ayey iigu kacaysaa?
Qiimaha lagu ijaaranayaa waa kala duwan yahay wuxuuna ku xiran yahay meeshu inta ay le’eg tahay, si kasta ha ahaatee lacag dhimis ayaa loo sameeyaa hay’adaha aan faaiido doonka ahayn. Goluhu waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inaad dhigto curaar (lacag lagaa sii hayo) si loogu bixiyo haddii waxyeello soo gaarta goobta. Marka la dhameeyo munaasabada oo uu eego sarkaal ka socda Golaha haddii uu arko in aan wax khasaaro ahi gaarin rugta, curaartaada waa laguu soo celinayaa.
Haddii aad doonayso inaad kiraysato baaga agtaada ah, hoolka ama xarunta bulshada waxaad u baahan tahay caymiska dadweynaha (kaasi wuxuu daboolayaa haddii ay ciddi meesha wax ku noqoto). Golaha ayaa laga yaabaa inuuu kaa caawimo abaabulida caymiskaan laakiin waxaa fiican in marka hore laga hubiyo Golaha. Fadlan macluumaad intaas ka badan wac 9205 5555 ama la hadal qof ku hadla afkaaga adigoo wacaya adeega mutarjumka ee Golaha 9280 1940.
Munaasabadaha jardiinooyinka baagaga Golaha
Haddii aad qorshaynayso xaflad ballaaran oo aad ku qabato baagaga iyo jardiinoooyinka Golaha, waxaad u baahan tahay ogolaansho rasmi ah oo Golaha ka soo baxay. Ogolaansho ayaa loo baahan yahay haddii:
* Ay imanayaan dad ka badan 30 qof munaasabada; iy/ama
* Haddii aad qorshaynayso in meesha lagu isticmaalo aalladaha codka sameeya kuwaas oo laga maqli karo banaanka (sida cayaarida muyuusig aad u dheer)
Sida ugu fiican oo lagu ogaan karo haddii aad u baahan tahay ogolaansho waa inaad la hadasho sarkaal ka socda Golaha. Haddii aad u baahan tahay ogolaansho waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka dalabka. Waxaa la isticmaalaa nadaamka ogolaanshaha si loo xaqiijiyo in munaasabadaadu tahay amaan cod dheerna aanay yeellanayn. Macluumaad muhiimka ah ee kale
Dawlad Goboleedka iyo Booliisku waxay leeyihiin doorar kala duwan xagga bixinta khamrada goobaha dadweynaha. Fadlan la hadal Golaha dadweynaha haddii aad doonayso in munaasabada khamro lagu cabo. Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan goobaha ijaarashada ee Yarra, fadlan wac Golaha 9205 5555 ama booqo www.yarracity.vic.gov.au. Waxaad kaloo la hadli kartaa qof ku hadlaa afkaaga adigoo wacaya adeega turjubaanka Golaha 9280 1940.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeegyada turjubaanka, fadlan wac 9280 1940 aweydiina qoraalka Yarralink ama booqo www.yarracity.vic.gov.au.